Degso ExpressVPN APK loogu talagalay Android
Bilaash Degso loogu talagalay Android (79.50 MB)
Codsiga ExpressVPN wuxuu ka mid yahay codsiyada VPN ee ay daalacan karaan kuwa doonaya inay marin u helaan internet aan xad lahayn oo aamin ah iyagoo adeegsanaya taleefannadooda casriga ah ee Android iyo kiniiniyada. In kasta oo ay bixiso adeeg bilaash ah hal maalin oo keliya, ka dib muddo hal maalin ah, waxaad ku iibsan kartaa 30 maalmood oo tijaabo ah lacag, iyo haddii aadan ku qanacsanayn codsiga inta lagu jiro muddadan tijaabada ah, waxaad dib u heli kartaa lacagtaadii isla markiiba. Sidaa darteed, waxaan sheegi karnaa in muddada tijaabada ugu weyn ay tahay soddon maalmood.
Kadib rakibidda dalabka, uma baahnid inaad wax ka qabato goobo badan oo waxa kaliya oo ay tahay inaad sameyso waa inaad dhaqaajiso VPN. Adeegayaasha ugu waaweyn ee VPN ee dalabka, oo leh adeegyo adduunka oo dhan, waxay ku yaalliin meelaha soo socda:
Codsiga, kaas oo ka shaqeyn kara isku xirka WiFi iyo 3G labadaba, wuxuu kuu oggolaanayaa inaad gasho boggaga internetka ee xannibay, halka aad qarinayso oo aad ilaalinayso xogtaada shaqsiyeed ee lagu wareejiyay xiriirinta. Marka, markaad isticmaaleyso isku xirnaanta internetka meelaha dadweynaha, waxaad hubin kartaa amniga macluumaadkaaga adigoon wax dhibaato ah qabin.
Codsiga, oo ay soo saartay soo -saarehu in uusan haynin macluumaadka ku saabsan adeegsadayaasha oo uusan la wadaagin dhinacyada saddexaad, ayaa kuu oggolaan kara inaad u isticmaasho isku -xirnaantaada internetka si aad u daalacato sidaad rabto, maadaama ay bixiso baaxad aan xad lahayn. Waxaan aaminsanahay in gaar ahaan kuwa jecel inay adeegsadaan taxanaha TV -ga iyo goobaha filimada ee intarneedka ay si weyn uga faaiideysan doonaan astaantan baaxadda aan xadidneyn.
Isticmaalayaasha raadinaya codsi cusub oo VPN waa inaysan dhaafin.
Cabirka Faylka: 79.50 MB
Horumar: Express VPN
Wararkii Ugu Dambeeyay: 29-07-2021
Codsiga ExpressVPN wuxuu ka mid yahay codsiyada VPN ee ay daalacan karaan kuwa doonaya inay marin u...
Zemana Antivirus waa codsi antivirus horumarsan oo loogu talagalay dadka isticmaala taleefanka...
NightOwl VPN waa dhakhso, ammaan, xasilloon, fududahay barnaamijka VPN ee isticmaalayaasha...
CM Security VPN, waxaad ka heli kartaa boggaga internetka ee laga mamnuucay aaladahaaga Android...
Oneday VPN waa barnaamij VPN oo bilaash ah oo bixiya marin -habaabinta IP inta u dhaxaysa 26...
SuperNet VPN waa codsi dhammaystiran oo bilaash ah, cabbir yar oo VPN ah. Si fudud u soo dejiso, si...
SuperVPN Macaamiisha VPN ee Bilaashka ah waa barnaamij VPN lacag laaan ah oo loogu talagalay...
Secure VPN waa codsi aad u dhakhso badan oo siiya dadka isticmaala taleefanka Android adeeg wakiil...
Tornado VPN App wuxuu bixiyaa taraafikada xogta aan xadidneyn, wuxuu furaa websaydhada xannibay...
Total VPN яке аз замимаҳои VPN аст, ки шумо бояд дар телефон ва планшети Android дар интернет...
Adigoo adeegsanaya dalabka Solo VPN, waxaad si aamin ah ugu xirmi kartaa internetka adoo...
Si ammaan ah iyo si gaar ahba u dhex mara internetka. Ku ilaali asturnaantaada internetka xiriir...